xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: February 2012
သမ္မတ အကြံပေးတွေကအင်တာဗျုးတစ်ခုမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလည်းတွေဟာ အခုအတိုင်း အရှိန်အဟုန်မပျက်နောက်မလှည့်ပဲ သွားမယ်ဆိုရင် နောင် ၁၅နှစ် အနှစ် ၂၀လောက်ကြာတဲ့ အခါ မြန်မာပြည်ဟာ စင်္ကာပူလို စီးပွားရေးအရ တိုးတက်လာဘို့အလားအလာရှိကြောင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အကိုးအကား လေ့လာသုံးသပ်ချက်တွေ အကိုးအကားနဲ့ ပြောတဲ့အခါ သမ္မတအကြံပေးတွေကို သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးက ပညာရှင်တွေနဲ့ မီဒီယာတွေက အတိုင်အဖေါက်ညီညီ ပြက်ရယ်ပြုခဲ့ကြတယ် ။ဒီနောက်ပိုင်း သမ္မတအကြံပေးတွေဟာ မီဒီယာတွေကို ခပ်ရှောင်ရှောင် နေခဲ့ကြတာကိုသတိပြုမိတယ် ။
အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ASEAN အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဆူရင်းပစ်စူဝမ်နှင့် တွေ.တဲ့အခါ မြန်မာပြည်ဟာ နောင် ၁၀ နှစ်ဆိုရင် အာဆီယံကို သာသွားမယ်လို့ ဘာအကိုးအကားအချက်အလက်မှမပါဘဲ ပြောလိုက်တဲ့အခါကြတော့ခုနက အသံကျယ်ခဲ့တဲ့ ပညာရှင်တွေနဲ့ မီဒီယာတွေဟာ ဘာသံမှ မထွက်ရဲကြဘူး ။အမြီးကုပ်ပညာရှင်တွေ ၊အမြီးကုပ် မီဒီယာတွေဘာလို့ ဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဆိုတာကို သိချင်လှတယ် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:16 AM
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် လွှတ်တော်တွင် မတ်လ (၁) ရက်နေ့မိန့်ခွန်းပြောမည်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် မတ်လ ( ၁ ) ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော်၌ အရေးကြီးသော မူဝါဒဆိုင်ရာ မိန့်ခွန်း တစ်ရပ် ပြောကြား မည်ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်မှလာသောသတင်းများအရသိရှိရပါသည် ။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ မိန့်ခွန်းများသည် ထူးခြားမှုများ ၊ နိုင်ငံအပြောင်းအလဲနှင့်ပတ်သက်သည်များ ပါရှိတတ်ပြီး ထိုသို့ပါရှိသည့် အတိုင်းလည်း အကောင်အထည်ပေါ်အောင်ဆောင်ရွက် တတ်သူ ဖြစ်သောကြောင့် အစိုးရသစ် တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ မိန့်ခွန်းများကို အများပြည်သူများ စိတ်ဝင်တစား ရှိခဲ့သည် ။
ယခုမိန့်ခွန်းတွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းလစာတိုးပေးရေးနှင့် အခြားသောဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ ပါဝင်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ပြောဆိုမှု့များရှိသော်လည်း သီးခြားအတည်ပြုချက်မရရှိသေးပါ ။ သမ္မတသည် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ပြီး ဒု ဥက္ကဋ္ဌ များအဖြစ် ဒု သမ္မတ များကဆောင်ရွက်ကာ အတွင်း ရေးမှူးအဖြစ် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန် ၀န်ကြီးက တာဝန်ယူပြီး ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်နှင့် ပြည် နယ် နှင့် တိုင်း ဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်များ ကအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြသည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 11:32 AM
ဦးနေ၀င်း အစိုးရလက်ထက်နဲ့ ၁၉၈၈နောက်ပိုင်း တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်တွေမှာ ချေးငှား သုံးစွဲခဲ့ လို. မြန်မာပြည်ဟာ အကြွေး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံ တင်နေကြောင်း အစိုးရက တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါ အစိုးရအဆက်ဆက်၏ လွဲမှားတဲ့ စီးပွားရေးနဲ. စီမံခန်.ခွဲမှုတွေကြောင့် အာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်ခဲ့လို့ ဒီလိုဖြစ်ရတာလို့ ပညာရှင်တွေရော မီဒီယာတွေကပါ တစ်လေသံတည်း ဝေဖန်ခဲ့ကြတယ် ။
လောလောဆယ် အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသား ကြွေးမြီ-National Debt စုစုပေါင်းဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄.၂ ထရီလီယံ ရှိတယ်။မြင်သာအောင်ပြောရရင် ဘီလီယံပေါင်း ၁၄၀၀၀ အကြွေးတင်နေတယ် ၊ နှစ် စဉ်နှစ်တိုင်း ဘတ်ဂျက် လိုငွေပြနေတယ် ကြွေးမြီကအကျမရှိဘူး။ အတက်ပဲရှိတယ်။ အခု အမျိုးသား ကြွေးမြီက ငါးနှစ်ကာလအတွင်း နှစ်ဆတိုးမြင့်သွားခဲ့ တာဖြစ်တယ်။ ဒီအထဲမှာတရုတ်ကို ဘီလီယံ ၇၀၀၀ ကျော် ၊ ဂျပန်ကို ၈၈၆ ဘီလီယံ ဆပ်စရာရှိနေတယ် ။အကြွေးဆိုတော့အတိုးပေးရတာပေါ့ ။ အိုဘားမားရဲ့ ၂ဝ၁၂ ဘတ်ဂျက်မှာ အတိုးပေးဖို့ လျာထားငွေ တောင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၆ဝ ဘီလီယံရှိတယ်။
သူတို့တိုင်းပြည်မှာ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်း အုပ်ချုပ်သွားတာမျိုးမရှိသလို ၊ ဦးနေ၀င်း ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေတို့လည်းအမေရိကားကိုသွားပြီး တွဲဘက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာမရှိပါဘူး ၊ ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမှု အမှန်တွေကြောင့် ဒီလောက်အကြွေးတွေ တင်သွားရတာလဲ သိချင်လှတယ် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 2:00 AM
လူများတိုင်းသာ လူကောင်းဆိုရင် ဟစ်တလာဟာ လူကောင်းကြီးပေါ့ (နောက် ၀ဲယာက လူပင်လယ်ကြီးကို သတိပြုပါ)
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 12:34 PM
( ဆောင်းပါးရှင် ဦး ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းရဲ့ သုံးသပ်တွေးခေါ်ပုံ ၊ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပုံများအား သဘောကျ နှစ်သက်မိပါသဖြင့် ပြန်လည်ကူးယူဖေါ်ပြအပ်ပါသည် )
လောကမှာ အနီးနဲ့ အဝေး မြင်တာချင်းမတူနိုင်ကြပါ။
နီးရင် အနုစိပ် မြင်တွေ့ရသည်မို့ အဖြစ်မှန်နဲ့ ပိုနီးစပ်ပါတယ်။ ဝေးသွားရင် မှုန်ဝါးဝါး ဖြစ်လာသည်မို့ မှန်ဘီလူး အကူလိုလာပါတယ်။
ဒါလောက ရဲ့ ဓမ္မတာတရားပါပဲ။ မှန်ဘီလူးအားကောင်းရင် ထင်းထင်းမြင်ရသလို မှန်ဘီလူးအားညံ့ရင် ၀ိုးတိုးဝါးတာ ဖြစ်စမြဲပါ။ နောက်တဆင့် မြင်ရတဲ့ အရာကို ထပ်ဆင့်အဓိပ္ပါယ်ဖေါ်ရပြန်ပါတယ်။
Interpretation ပဲပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ မှန်ဘီလူးရော ၊ Interpretation ဆိုတာတွေဟာ အသိစွမ်းအား Knowledge Capacity နဲ့ ဥါဏ်စွမ်းအား Intellectual Capacity တွေရဲ့ Function လာဖြစ်ရတာပဲ လို့ သုံးသပ်ကောက်ချက်ချ နိုင်ပါတယ်။ အဆုံးမှာ တော့ လူပိန်းစကားနဲ့ ပြောရရင် ဘယ်လောက် (သိ) သလဲ ၊ ဘယ်လောက် (တွေး) နိုင်သလဲ ဆိုတာလာဖြစ်တာပဲ။ (သိ) ရုံနဲ့ မလုံလောက် (တွေး) နိုင်မှ (မြင်) မှာကိုး။ ကြည့်သောသူသည့် မြင်၏ ဆိုသလို (ကြည့်) ဖို့လည်း (သိ) ရမယ် ၊ (မြင်) တာကိုတခါ ဒါဘာလဲ ဆိုတာကို (သိ) ရမှာကိုး။ (အသိ) နှစ်ဆင့်လို့ဆိုရမလား မသိဖူး။
မီးတောင်မှ နီးမှပူတာပါ။ ဝေးသွားရင် မီး အရောင်ကိုပဲ မြင် ရတော့သည် ၊ အပူဓါတ် ကို မခံစားနိုင်တော့ပါ။
ညအခါမှာ ကောင်းကင်ကြီးစီမို့ မော့ကြည့်လိုက်ပါ။ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် အရာများကိုမြင်ရပါမည်။ သာမာန် (အသိ) နှင့်ပြောလျှင် ဒါတွေဟာ (ကြယ်) တွေပါဟု ဆိုကြမည်သာ။ တချို့မှာ ကြယ် များဖြစ် ကြသော်လည်း တချို့မှာ ဂြိုလ်များစီမှ နေရောင်ဟပ်နေသည်ပါ။ တချို့မှာတော့ ဝေးလွန်းသဖြင့် ကြယ်ပေါင်းသန်းချီပါဝင်သည့် ကြယ်အစု galaxy ကို အလင်းစက် တစ်စက်အနေဖြင့်သာ မြင်နေကြ ရသည်ပါ။
သာမာန်မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်သော celestial bodies ဟုခေါ်သည့် စကြာဝဠါကြီး၏၀တ္ထုများ အသင်္ချေနှင့် အန္တရှိပါသေးသည်။ သက်ဆိုင်ရာ မှန်ဘီလူး telescope များနှင့်ကြည့်မှာသာ မြင်နိုင်ပါသည်။ မှန်ဘီလူးအားကြောင့့် မြင်လာသော်လည်း Astro-Physics ကိုနားလည်သူမှ ဘာဟာဘာဆိုတာကို ခွဲခြားနိုင်ပါမည်။ သို့သော် Specialized researchers များသာ မိမိဆိုင်ရာဘာသာရပ်ကို တိတိကျကျ ခွဲခြားစိပ်ဖြာသုံးသပ်နိုင်ပါမည်။
ထို့ကြောင့် (အသိ) ချင်း မတူရင် သုံးသပ်တာချင်း မတူနိုင်သလို ၊ (အမြင်) ချင်း မတူနိုင်တော့ပါ။ (အသိ) ဆိုတာ အနီးအဝေး နဲ့လည်း ဆိုင် သလို ဘ၀အတွေ့အကြုံ နဲ့ လေ့လာအား နဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဒီလောက်လေရှည်ခံပြီး နိဒန်းပျိုးနေရပါသလဲ။
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တပ်ဦးကျောင်းသားဟောင်း ဒေါက်တာညီညီရဲ့ လက်တဲ့ အဆန်းခံရပြီးကတည်းက ပညာရေးစနစ်ဟာ ပျက်စီးယိုယွင်းလာခဲ့တာ အနှစ် ၄၀ ကျော်လာပြီမို့ (အသိစွမ်းအား) နည်းမှု CapacityDeficit နဲ့ယနေ့ အထိရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ ထို့ပြင် လက်ဝဲသူငယ်နာမစင်ကြသေးကုန်သော အသီးသီးသော လက်ဝဲဆရာကြီးများရဲ့ ဒိဋ္ဌိ အစွဲဟာ ချွပ်ရအင်မတန်ခက်ပါတယ်။ တိုင်းပြည် ပြင်ပရောက် အတိုက်ခံတွေကိုကြည့် ပါလျှင်လည်း ထူးမခြားနား လက်တွေ့ထက် Rhetoric ကိုဦးစားပေးကြတုန်းရှိကြပါသေးတယ်။ (အသိ) အားနဲမှု နဲ့ (အသိ) လွှဲမှားမှု တွေကြောင့် ပြည်ပနိုင်ငံရေးလောက မှာ နာနာအော် ၊ ကျယ်ကျယ်အော် ၊ ကြာကြာအော် တာကလွဲရင် လက်တွေ့ကျတဲ့ ၊ ရည်မှန်းချက်ရှိသည့် နိုင်ငံရေး ကို အနှစ် (၂၀) မဖေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ ဖေါ်ဆောင်ရမှန်းပင် မသိကြပါ။ အများစု မှာ ဦးနေ၀င်း အာဏါသိမ်းပြီးမှ လူဖြစ်လာရသူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အရပ်သားအများစုမှာ (အာဏါ) အကြောင်းနားမ လည် ကြပါ။ ပိုဆိုးတာက ဦးနေ၀င်းဟာ တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ အဆောက်အဦမဏ္ဍိုင်အား လုံးကိုရိုက်ချိုးခဲ့ပြီး စစ်တပ်တခုထဲသာ Institution အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြံဆောင် ခဲ့တာကြောင့် ပြည်သူအများစု ဟာ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ရပ်တည်ရမည်ဆိုတာ ၊ အဖွဲ့အစည်းဘယ်လိုထူထောင်ရမယ် ဆိုတာတောင် မသိ နိုင်ကြတော့ပါဖူး။ ဒါကြောင့် (၅) ယောက် တဖွဲ့ ၊ ဆယ်ယောက်တဖွဲ့ နဲ့ ဂိုင်းဂဃ စိတ်တွေအကြား ၊ နိုင်ငံရေးနွံ ကမထွက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြရတယ် လို့ခံစားမိတယ်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှု ကိုကြည့်ရင် လက်ဝဲ၀ါဒ နဲ့ လက်ဝဲစာပေတွေက သာ လွှမ်းမိုးထားတာကြောင့် အများစု၏ အတွေးမှာ အတိုက်ခံဆိုတာ အစိုးရကိုဆန့်ကျင်ဖို့ လို့သာနားလည်ကြတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ စနစ်ပြောင်း ဖို့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို (မသိ) ကြဖူး။ ပြောင်းလဲမှု တခုထဲကြည့်လို့ မရ ပေးစပ်မှု ကိုလည်းကြည့်တတ်ရမယ်ဆိုတာကို နားမလည်ကြ။ ကဒါဖီရဲ့ ရုပ်အလောင်းကြီးကိုသာ မြင်ကြသည်။ အသက်ပေးသွားတဲ့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ မျက်နှာကိုတော့ မမြင်နိုင်ကြ။
နိုင်ငံရေးမှာ ဗျူဟာ Strategy ရှိရမယ်။ ဗျူဟာကိုဖေါ်ဆောင်ဖို့ အဖွဲ့အစည်းရှိရမယ်။ အဖွဲ့အစည်းကိုဦးဆောင်မဲ့ အရေအသွးမြင့်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုလိုအပ်တယ်။ မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှု ပေးနိုင်ဖို့ (အသိစွမ်း အား) လိုလာတယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို ဖေါ်ထုတ်နိုင်ဖို့ အဆင့်ဆင့် ခေါင်းဆောင်ငယ်တွေရှိရမယ်။ နောက်လိုက်တွေရှိရမယ်။ မျိုးဆက်သစ်တွေ ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်ဖို့ လူငယ်တွေကို မွေးထုတ်ပေးရမယ်ဆိုတာတွေကို (မသိ)ကြတော့ဖူး။ Capacity မရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေထိပ်မှာရောက်လာရင် ပေါလ်ပေါ့ ( Pol Pot) တို့လို လူသတ်သမားတွေဖြစ်သွားနိုင်သလို ၊ အာဏါရူးပြီး အချင်းချင်း ဖြုတ်-ထုတ်-သတ် ရင်းအားလုံး မြေကြီးအောက် ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကို မသိကြတော့ဖူး။ အတိပ်ကို (မြင်) အောင်မကြည့်နိုင်ကြတော့ သင်ခမ်းစာ ယူဖို့ပင် (မသိ) ကြတော့။ အကြမ်းဖက်နည်း အပြင် တခြားနည်းလမ်း တွေနဲ့လည်းပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကို (မမြင်) (မသိ) နိုင်ကြတော့ဖူး။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 12:06 PM
NLD ပါတီကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သတိပေးစာထုတ်ပြန်
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ( NLD ) ပါတီ အား တည်ဆဲ ဥပဒေ ၊ နည်းဥပဒေ ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များအား တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး အောက်ခြေ အဖွဲ့များအားကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး သတိပေးစာတစ်စောင်အား ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက် ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်သတိပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည် ။
အဆိုပါစာမှာအောက်ဖေါ်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် ။
၀န်ထမ်းလစာ တိုးမြှင့်ရေး မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်မည်ဟု သူရဦးရွှေမန်း ပြောဆို
၀န်ထမ်းလစာ တိုးမြှင့်ရေးမှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ တခဲနက်ထောက်ခံချက်ဖြင့် အတည်ပြုထားသော ကိစ္စဖြစ်၍ ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်သွား မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပြောကြားလိုက်ကြောင်း The Voice Weekly သတင်းအရ သိရှိရပါသည် ။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမ တွင်ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်၊ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် မီဒီယာများ ကို ယင်းကဲ့သို့ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး "လစာတိုးရင် ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်မယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်မှာစိုးလို့ လစာမတိုးဘဲနေလို့ရမလား။ လစာတိုးပေမယ့် ကုန်ဈေးနှုန်းမမြင့်အောင်ဘာလုပ်မလဲ။ ဒါကို စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ လစာတိုးတိုး မတိုးတိုး မဖြစ်သင့်တဲ့ကုန်ဈေးနှုန်းဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စကို ဖြေရှင်းပေးဖို့လိုတယ်"ဟု သူရဦးရွှေမန်း ကပြောကြားခဲ့ကြောင်း အဆိုပါသတင်းတွင် ဖေါ်းပြထားသည် ။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့တက်ရောက်လာသူများက လစာတိုးမြှင့်ပေးရေးကို ထောက်ခံခဲ့ကြပြီး ကုန်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်လာခြင်းမရှိစေရန်ကိုလည်း ၄င်းတို့၏ အမြင်များကို ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း လည်း သိရှိရပါသည် ။
ကျင်းပဆဲပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့က လာမည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် နိုင်ငံသားများ၊ ၀န်ထမ်းများ၏ လုပ်ခ၊ လစာစရိတ်နှင့် ချီးမြင့်ငွေများကို မဖြစ်မနေ တိုးမြှင့်ပေးရေးအပါအ၀င် အချက် ( ၆ ) ချက်ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေမန်းက အဆိုတစ်ရပ် တင်သွင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ကန့်ကွက်သူမရှိ ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ေ ဖဖေါ်ဝါရီ(၁၆)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလှထွန်းက နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်အခြေအနေများအရ ယခုလာမည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် နယ်စပ်ဒေသ ၈၅ မြို့နယ်မှ ၀န်ထမ်း ၃၇၈၁၇ ဦးအတွက်သာ လုပ်ခလစာများ တိုးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ ပြီးနောက် သူရဦးရွှေမန်းက ၀န်ထမ်းလစာ တိုးမြှင့်ရေး မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်မည်ဟု ထပ်မံပြောကြား လိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 2:41 AM
မြန်မာပြည်မှာ အကြီးဆုံးတရားပွဲကြီး ရန်ကုန်မြို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ကျင်းပနေပါတယ် ၊ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးနောက်ခံထားလို့ ခန့်ငြားထည်ဝါလှတဲ့ ပုလ္လင်တော်ကြီးပေါ်မှာ သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး ၊ သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး အစရှိတဲ့ သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေက တရားရေအေးတွေ တိုက်ကျွေးလာတာ ၄ ညတိုင်သွားပါပြီ ။
ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့လှတဲ့ တရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းကလည်း တရားတော်နာကြွရောက် လာကြတာ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ကြီးနဲ့ အပြည့်အလျှံပါဘဲ ဒါပေမယ့် ငြိမ်သက်စွာ တရားတော်တွေကို နာယူနေကြတယ် ၊ တရားနာသူအချင်းချင်းတောင် တစ်ဦးကို တစ်ဦးအပြန်အလှန်ကြည်ညိုလေးစား သွားရလောက်အောင် အေးချမ်းခဲ့ကြတယ် ။
ဒီလိုကြီး ရွှေတိဂုံစေတိတော်မြတ်ကြီးကို နောက်ခံထားပြီး ကျယ်ခမ်းနားလှတဲ့ အဆင်အပြင်တွေနဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ တရားပွဲကြီးဖြစ်ဘို့ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဟာ တစ်လနီးပါးပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတွေမို့ထင်တယ် အကုသိုလ် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်တွေ မမြင်ကြဘူး ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 9:23 PM
အရှင်ဘုရားကို သီတဂူဆရာတော်ကြီး အစချီသော နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကထိကများကဲ့သို့ ၊ တရားခွေ ဓမ္မစာပေများကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ဟီလာရီကလင်တန်နှင့်တွေ့ခြင်း ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အား လေဆိပ် ကားဂိတ် စသောနေရာများတွင် ကြိုဆိုခြင်း ၊ နိုင်ငံရေးပါတီကြီးမှ ထင်ရှားသော ဒကာမ၏ပုံများကို ကျောင်းတိုက်တွင် ချိတ်ဆွဲကာ အဆိုပါ ပါတီကြီး၏ ပွဲလမ်းသဘင်များကျင်းပခြင်း အစရှိသော သာသနာတော် သန့်ရှင်းတည်တံ့ပြန့် ပွားရေးဆောင်ရွက် ချက်များကြောင့် စတင်သိရှိခဲ့ရကြောင်း ဦးစွာဝန်ခံပါရစေဘုရား.......။
အရှင်ဘုရားထံမှ တပည့်တော်ပထမဦးဆုံးနာကြားရသည့် တရားတော်မှာ အရှင်ဘုရား၏ ဒကာ ၊ ဒကာမ များလွန်စွာကြိုက်နှစ်သက်သော " ပင်ဝါးရုံတရားတော် " ဖြစ်ပါသည်ဘုရား ၊ အခြားသောဆရာတော် များကဲ့သို့ လမ်းရိုးအတိုင်း ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်၊ ပိဋကတ်တော်များထဲမှမဟုတ်ဘဲ တမူခွဲထွက်ကာ အလယ်တန်း ဖတ်စာထဲမှ ပင်ဝါးရုံအကြောင်းကို ကမ္ဘာကျော်အောင် ဆန်းသစ်ဟောကြားတော်မူနိုင်သော အရှင်ဘုရား၏ စွန့်ဦးတီထွင်နိုင်စွမ်းကို မကန်တော့ပဲ မနေနိုင်အောင်ဖြစ်ရပါသည် ဘုရား ။
မြန်မာ့သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် သတင်းမီဒီယာများ ၊ နိုင်ငံရေးသမားများကသာ သံဃာတော်များကို နိုင်ငံရေးတွင် ခုတုံးလုပ် အသုံးချသွားခဲ့သည်ကို အထင်အရှား တွေ့နိုင်ပါသော်လည်း အရှင်ဘုရားလက်ထက်တော်ကြမှပင် နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် သတင်းမီဒီယာများ ကို ကောင်းကောင်းကြီးပြန်အသုံးချနိုင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် ဘ၀နတ်ထံပျံလွန်တော်မူသွားကြ ကုန်သော သမိုင်းတစ်လျှောက်အသုံးချခံ ဆရာတော်ကြီးများက ရောက်ရာ ဘုံဘ၀မှ အရှင်ဘုရားကို သာဓုခေါ်နေတော်မူကြမည့်အရေးတွေး၍ တပည့်တော် စိတ်ကြည်နူးမိပါသည် ဘုရား ။
တပည့်တော်၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့မှ လူသိရှင်ကြား ဆိုသလို ဒုဗ္ဗစ ပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်းကြေညာချက်ကို အရှင်ဘုရားလက်ထက်တော်မှပင် ကြားဘူးခွင့် ရသည့်အတွက်လည်းကောင်း ၊ ဒုဗ္ဗစ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသည်မှာဆုံးမ ပြောဆိုရခက်သူဟု အနက်ရှိပြီး ၊ တတိယ သဒ္ဓမ္မသမ္မောသသုတ် တော်လာ သာသနာပျက်ရာအကြောင်း ၅ပါး တွင် တစ်ပါးအပါအ၀င်ဖြစ်ကြောင်း တို့ကိုပါ ဆက်တိုက်ဆိုသလို သိရှိခွင့်ရခဲ့သည့်အတွက် အရှင်ဘုရားရဲ့ ကျေးဇူးတော်ကြီးလှပါသည် ဘုရား ။
လူတွေ ဆူဆူပူပူနဲ. ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဆန္ဒပြတာတွေ အုန်းအုန်းကျွက်ကျွက်နဲ. ပြဿနာဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တော်မူလို. အရှင်ဘုရားရဲ့ခံစားချက်တွေကို ဘာမှ မပြောပဲ မျိုသိပ်ပြီး အနစ်နာခံတော် မူနေတဲ့အကြောင်း ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနတွေကို မိန့်ကြားရလွန်းလို့ မောပန်းတော်မူနေ တဲ့ကြားက တပည့်တော်ရဲ့ လျှောက်ထားချက်ကို လျှောက်ထားခွင့် ပြုတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးကြီးပါတယ်ဘုရား ......
မနက်ဖြန်မှပဲ ဒုတိယပိုင်း ဆက်လျှောက်ပါတော့မယ်ဘုရား ....
ထောင်ကျော်တန် sim card ပေါ်ပေါက်ရေး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက အဆိုတင်သွင်းရန် ပြင်ဆင်
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီက ကျင်းပဆဲဖြစ်သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်မည့် ငွေကျပ်ထောင်ကျော်တန် sim card များ ပေါ်ထွက်လာရန် အဆို တစ်ရပ်တင်သွင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည် ။
ယခုအခါ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအနေဖြင့် အဆိုတင်သွင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ၏ အကြံဥာဏ်များရယူကာ သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည် ။
မြန်မာပြည်တစ်လွှားတွင် ၅၀၀၀ ကျပ်တန် ဆင်းမ်ကဒ် ပေါ်ပေါက်လာရေး အတွက် ပြည်သူအများက ဆန္ဒရှိနေကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်းဌာနများ တွင် ဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖေါ်ပြနေချိန်တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ယခုကဲ့သို့ အဆိုတင်သွင်းရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည် ။
သို့ရာတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ယခုကဲ့သို့ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို အကောင်အထည်ပေါ်ရေး ဆောင်ရွက်လာသော အခါတွင်မူ ယခင် ၅၀၀၀တန် ဆင်းကဒ်ပေါ်ပေါက်ရေး အဆက်မပြတ် ရေးခဲ့ကြသော ပြည်တွင်း သတင်းဌာနအချို့ကပင် ယခုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ မဲရရှိရေးအတွက် မဲဆွယ်လို၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်သံများ ထွက်ပေါ်လာပြန်ကြောင်း သိရှိရပါသည် ။
မြန်မာအစိုးရကို လှောင်ပြောင်သရော်သည့် လမ်းဆုံကဂျမ်းပုံ အစီစဉ်တင်ဆက်သူ RFA မြန်မာပိုင်းအစီစဉ်ဌာနမှူး ဒေါ်ငြိမ်းရွှေ ကို ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် တွေ့ရပုံ
လွတ်လပ်သော အာရှအသံ (Radio Free Asia - RFA ) ၏ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ် ဌာနမှူး ဒေါ်ငြိမ်းရွှေနှင့် RFA သတင်းထောက် နှင့် အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ ဦးကျော်ကျော်အောင်တို့သည် RFA၏အရှေ့တောင်အာရှ အမှုဆောင် ထုတ်လုပ်မှုအရာရှိနှင့် ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဆူစန်လာဗရီနှင့်အတူ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း သိရှိရပါသည် ။
အဆိုပါ RFA ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူများ အပါအ၀င် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း RFA က သတင်းထုတ်ပြန်ပါသည် ။
မြန်မာအစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပြည်ပသတင်းမီဒီယာများနှင့်ပတ်သက်သည့် မူဝါဒသဘောထား များ ပျော့ပြောင်းလာခဲ့သော်လည်း RFA ၏ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ် ဌာနမှူး ဒေါ်ငြိမ်းရွှေသည် လမ်းဆုံကဂျမ်းဘုံ ရေဒီယိုအသံလွှင့် အစီအစဉ်ကို စီစဉ်တင်ဆက်ပြီး အဆိုပါအစီအစဉ်မှ တစ်ဆင့် မြန်မာအစိုးရကို ယနေ့တိုင် လှောင်ပြောင်သရော်နေသူဖြစ်သည် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:10 AM
မစင်ကြယ်သော ရဟန်းများ ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပိုမိုအတင့်ရဲလာမည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် ဦးဂမ္ဘီရ (ခ) ဦးစန္ဒောဘာသ (ခ) လူအမည် ညီညီလွင်အား ၀ိနည်းဓမ္မကံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်အညီ ထိရောက်စွာအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ထုတ်ကြေးမုံသတင်းစာ တွင် အတိအလင်း ဖေါ်ပြထားသည် ။
အဆိုပါ ဦးဂမ္ဘီရ (ခ) ဦးစန္ဒောဘာသ (ခ) လူအမည် ညီညီလွင် သည် လူအတန်းပညာ ၄တန်း ( မအောင်ပါ ) ၊ ရဟန်းပညာ ပထမငယ်တန်းပင် အောင်မြင်ခြင်းမရှိသော်လည်း ၊ အစိုးရအတိုက်အခံ များ ၊ အစိုးရနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အသွင်ဆောင်သော သတင်းဌာနများက သံဃတပ်ပေါင်းစု ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဘုံမြှောက်ခြင်းခံရသူဖြစ်သည် ။
မြန်မာနိုင်ငံက အပြောင်းအလဲများကို ကူညီချိန်ရောက်ပြီ
(အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီဥက္ကဌ ဂျွန်ကယ်ရီရဲ့ Supporting change in Burma ဆောင်းပါးကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ )
နှစ်ငါးဆယ်ကျော် စစ်အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာ နေခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် အခုအချိန်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ သူ့တို့ အနေနဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံနဲ့ ဆက်ဆံရေး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိတယ် ဆိုတာ အချက်ပြလာ ခဲ့ပါပြီ။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မြန်မာနိုင်ငံကို စောင့်ကြည့်နေသူတွေ စိတ်လှုပ်ရှားစေတဲ့၊ စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီး ဖြစ်စေတဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ တစ်သီတစ်တန်းကြီး လုပ်ခဲ့တယ်။ အခု အဲဒီနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားသူတွေ အနေနဲ့ ဆယ်စုနှစ်များစွာ အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် စိတ်အားတက်စရာတွေ တွေ့လာနေရပြီ ဖြစ်တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လမှာ သမ္မတနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ပြီး ကထဲက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းတွေ အရှိန် ရလာခဲ့တယ်။ နိုဝင်ဘာမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်က မြန်မာနိုင်ငံကို သမိုင်းဝင်ခရီး သွားခဲ့ပြီး ဆက်ဆံရေး ကောင်းဖို့အတွက် ဘာတွေလိုတယ် ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြခဲ့တယ်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက အိုဘားမား အစိုးရရဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး ကိစ္စကို အပြုသဘော ဆောင်ပြီး တုန့်ပြန်ခဲ့တယ်။
မြန်မာ ခေါင်းဆောင်တွေက အပြောနဲ့မဟုတ် အလုပ်နဲ့ သက်သေ ပြခဲ့တဲ့အတွက် တိုးတက်မှုအချို့ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေ အတွင်းမှာ အစိုးရက ရာချီနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်၊ လာမည့် ဧပြီလမှ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ သတ်မှတ်ပေးတယ်၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ တွေနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာတဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ အခု အမေရိကန် မူဝါဒ ချမှတ်သူ တွေနဲ့ ဥပဒေပြုသူတွေ အတွက် မေးခွန်းက ဘာဆက်လုပ်မလဲ၊ အစိုးရရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို သိရအောင် ဘယ်လို လုပ်နိုင်သလဲ၊ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ လိုသူတွေ ဘယ်လို အကောင်းဆုံး ကူညီနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပဲ။
အစဉ်အလာအရ အမေရိကန်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ကွန်ဂရက်က ချုပ်ကိုင်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ တင်းကျပ်တဲ့ ပိတ်ဆို့မှုတွေ ချထားတယ်၊ အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ မြန်မာမူဝါဒကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်တယ်၊ ငွေသုံးစွဲမှု တွေကို ထိန်းချုပ်ထားတယ်။ လွှတ်တော် အမတ်တွေရဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှိလာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် သဘောထားကို နေ့ချင်း ညချင်း ပြောင်းလိုက်ဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါမေမယ့် မြန်မာအစိုးရ ဘက်က တိုးတက်မှုတွေ ရှိလာရင်တော့ အရင်တုန်းက ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ အစိုးရတွေကို ဆက်ဆံသလိုပဲ ဆက်ဆံရေး တိုးတက်ဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင်ဖို့ အသင့် ရှိပါတယ်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 12:07 AM
သူတို့ရင်တွေထဲမှာ ၊ မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ မိုးတွေရွာနေတယ် ချိုတူးဇော်
ဒီမနက် သတင်းတွေဖတ်လိုက်တော့ ဒီအပေါ်ကစာလေး သွားဖတ်မိတယ် ၊ ချိုတူးဇော်ရေးထားပြီး ဆရာကို အော်ပီကျယ်က များများဖတ်ဖြစ်ကြအောင် ကူညီကြပါဆိုပြီး share လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် သူရေးထားတဲ့စာကို မမြင်ရမှာစိုးလို့ အောက်မှာထပ်ပြီး ဖေါ်ပြလိုက်တယ် ။
တိုင်ရီ စက်ရုံရှေ့မှာ ဒိုင်းတွေ လွှားတွေနဲ့ စောင့်နေတဲ့ ညီအကိုရဲဘော်တို့ရေ. . . အဲဒီ ခင်ဗျားတို့ရှေ့က နေပူထဲမှာ မျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့ ဆောင့်ကြောင်ထိုင် နေကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေဟာ. . . လစဉ် ခေါင်းခဲအောင် စီစဉ်နေရတဲ့ မလောက်မငှလစာငွေလေးက အသက်ရှုချောင်မလားလို့ . . . တောင်းဆိုကြတဲ့ ခင်ဗျားတို့ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သားသွေးသားဆွေမျိုးတွေပါ။ အဲဒီ ပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်က တိုးမပေးနိုင်ဘူး လို့ ငြင်းလိုက်တဲ့အတွက်များ တုတ်တွေနဲ့ ရိုက်ဦးနှက်ဦးကြမလို့လား ဗျာ... . စဉ်းစားကြပါဦး။ ခု ကိုပဲ လစာ မတိုးခင် မီတာခတွေတိုး လို့၊ ခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေထဲမှာကော. . .အိမ်ရှင်မတွေ၊ မိခင်တွေ ညည်းကြတွားကြတာတွေ မလုပ်ဖြစ်ကြဘူးလား။ သူတို့ရတဲ့လစာ နဲ့ဆို ပို ဆိုးမယ်. . .လို့ မတွက်မိကြဘူးလား။ သူတို့ . . .သူဌေးဖြစ်တောင်းဆိုနေတာ မဟုတ်ဘူး. . . သူတို့ . . .NLD အတွက် တောင်းဆိုနေတာ မဟုတ်ဘူး သူတို့. . . .ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာလည်း စိတ်မ၀င်စားဘူး သူတို့. . . .ထမင်း၀၀ စားရဖို့ သူတို့ . . .ကလေးတွေ ပညာသင်နိုင်ဖို့ သူတို့. . . ကြပ်တည်းလွန်းတဲ့ ဘ၀တွေကနေ အသက်ရှုချောင်ရုံလေး . . . ဒီခေတ်ကြီးထဲ တလလုံး ၂သောင်းခွဲနဲ့ ဘယ်သူလောက်မလဲဗျာ. . သူတို့ တကယ်ကို စားမလောက်လို့. . . တောင်းဆိုနေကြတာပါ. . .။ ဒီလို လစာ ဖြစ်နေရတာကိုးက ရင်နာစရာကောင်းလှပြီ။ သမ္မတကြီးနဲ့ အစိုးရ၀န်ကြီးများ၊ အမတ်မင်းများ. . . ခင်ဗျားတို့ဗျာ. . . ခင်ဗျားတို့. . .ဒီလိုပဲ . . .အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းလိုက်ကြမလို့လားဗျာ. . . ရဲဘော်တို့ရေ. . . ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားတဲ့ တုတ်တွေနဲ့ အဲဒီ မျက်စိသူငယ်နားသူငယ်နဲ့ ထိုင်နေတဲ့ အဲဒီအလုပ်သမားတွေရဲ့ ချွေးစို့နေတဲ့ မျက်နှာတွေကို မရိုက်ခင်မှာ. . . ခင်ဗျားအိမ်က အိမ်ရှင်မ ကို . . .အမေ့ကို သတိရမယ် ဆိုရင်. . ခင်ဗျားတို့ရဲ့ တုတ်တွေကို လွှတ်ချပြီး အဲဒီ အလုပ်သမားတွေရဲ့. . .လက်တွေကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ကြစေချင်တယ်။ ချိုတူးဇော်
ချိုတူးဇော်ရဲ့စာအသွားအလာကိုကြည့်ရတာ တိုင်ရီစက်ရုံက အလုပ်သမားလေးတွေနဲ့ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေကြား ပဋိပက္ခမဖြစ်စေလိုတဲ့ စေတနာထက် ဆန္ဒပြနေတဲ့အလုပ်သမားတွေကို သနားအောင်လုပ်ပြီး အစိုးရကို ပြည်သူတွေမုန်းသွားအောင် ၊ " ဒီလောက်သနားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်သမားလေးတွေကို အစိုးရက လုပ်ရက်လေခြင်း" ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်မျိုးချအောင်ရေးထားတယ်ဆိုတာ သိသာနေတယ် ၊ ချိုတူးဇော်အရင်ရေးနေတဲ့စာတွေ ၊ comment တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ကောက်ချက်ဆွဲလိုက်ရင် ဒီသဘော ပိုထင်ရှားလာတယ် ။
လောလောဆယ်စက်မှုဇုံတွေက စက်ရုံတွေမှာ အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားတွေဟာ နှစ်ဘက်သဘော တူညီချက် စာချုပ်တွေနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်နေကြရတယ် ၊ ဆိုလိုတာက အလုပ်ရှင်က လစာဒီလောက်ပေးမယ် ၊ အလုပ်ချိန်ဒီလောက်လုပ်ရမယ် ၊ နားရက်က ဒါတွေ ၊ အချိန်ပိုကြေးကဒီလောက် စသည်ဖြင့် ဖေါ်ပြထားတာကို အလုပ်သမားတွေက သဘောတူလို့ ၀င်လုပ်နေကြတဲ့သဘောဖြစ်တယ် ။
ခုဆန္ဒပြတာက အဲဒီလို သဘောတူထားတာကို စက်ရုံဘက်က ချိုးဖေါက်လို့ ဆိုတာထက် မူလသဘောတူထားတဲ့ လစာဟာ ခေတ်နဲ့ မလျှော်ညီတော့တဲ့အတွက် အလုပ်သမားတွေက တိုးပြီးတောင်းဆိုရာကနေ စတဲ့ ပြဿနာဖြစ်တယ် ၊ ဒီတော့ အလုပ်ရှင်က သူတိုးပေးနိုင်တဲ့ တစ်နာရီလုပ်ခ ၁၀၀ ထိ တိုးပေးလိုက်တယ် ၊ ဒါကိုတစ်ချို့ကကြေနပ်သွားကြတယ် တစ်ချို့က ၁၅၀ ထိတိုးတောင်းလို့ ဆန္ဒပြပွဲက မပြီးနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ် ။ တိုးတောင်းတဲ့သူတွေကိုလည်း အပြစ်မဆိုသာသလို ၊ စက်ရုံကလည်း သူရဲ့ ၀င်ငွေထွက်ငွေကိုတွက်ပြီး တိုးပေးနိုင်မှပဲ တိုးပေးမှာဖြစ်တယ် ၊ အရှုံးခံပြီးတော့တော့ တိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူး ။
ခုအခြေအနေက စက်ရုံကလည်း ဆက်ပြီးတိုးမပေးနိုင်တော့ဘူး ၊ တစ်ဘက်ကလည်း မလျှော့ဘူး ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ ၊ အကြမ်းဘက်မှုတွေ ၊ မီးရှို့တာတွေ ဖြစ်လာမှာစိုးလို့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက Show of Force လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ် ၊ သဘောက မင်းတို့ အေးအေးဆေးဆေး တောင်းဆိုစရာရှိတာကို တောင်းဆိုကြကွာ ၊ ဖျက်လားဆီးလား မီးရှို့လားတော့ မလုပ်ကြနဲ့ ဆိုပြီး အင်အားပြ ဟန့်တားတဲ့သဘောဖြစ်တယ် ။ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ရောက်လာတိုင်း ရိုက်တော့မဟဲ့ ၊ နှက်တော့မဟဲ့လို့ ထင်နေတဲ့ မောင်ရင့်စိတ်ကို အရင်ပြင်ရမယ် ။
နောက်တစ်ခုက ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ တစ်လ ၂သောင်းခွဲနဲ့ ဘယ်သူလောက်မလဲဗျာ လို့ မောင်ရင် ရေးထားတယ်နော် ၊ မှန်တယ် ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ လစာ ၂သောင်းခွဲနဲ့ ဘယ်သူမှမလောက်ဘူး ၊ ဒါဆိုရင် မောင်ရင်ခုနပြောတဲ့ ဒိုင်းတွေလွှားတွေကိုင်ထားတဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လေးတွေက တစ်လကို ၂သောင်း ၂ထောင်ပဲရတယ် ၊ ကဲ....ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ။ အဲဒီဒိုင်းကိုင်ထားတဲ့ ရဲသားလေးတွေဟာ ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကို မောင်ရင့်ထက် ကိုယ်ချင်းစာတတ်တယ် ၊ နားလည်တယ် ဆိုတာကိုမေ့မနေဘို့လိုတယ် ။
နောက်ပြီးပြောချင်တာက ခုဆန္ဒပြနေတယ်ဆိုတဲ့ တိုင်ရီစက်ရုံ အပါအ၀င် အဲဒီစက်မှုဇုံတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ အလုပ်သမားအများစုဟာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း မိသားစုဝင်တွေ အများစုဖြစ်တယ် ။ ခုဆန္ဒပြနေတဲ့ အလုပ်သမားတွေထဲမှာ ဒိုင်းတွေလွှားတွေ ကိုင်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်လေးတွေရဲ့ မိဘဇနီးသားသမီးတွေ ၊ သေနတ်ကိုင်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ ခလရ ၆ ကမိသားစုဝင်တွေ အများကြီးပါနေတယ်မောင်ရင် ၊ မောင်ရင်ပြောတဲ့ ပြည်သူဆိုတာ သိပ်ပြီးယေဘူယျကျလွန်းပါတယ်ကွာ.... ခုဆန္ဒပြနေတာ သူတို့ရဲ့ မိဘ၊ ဇနီး ၊ သားသမီးအရင်းတွေကွ....။
တစ်ဘက်က တာဝန်အရ ယူနီဖောင်းကြီးဝတ် ဒိုင်းကြီးတွေကိုင်ပြီး ဟန်ရေးပြနေပေမယ့် ၊ ဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေနဲ့ ဒိုင်းကိုင်နေတဲ့သူတွေဟာ ညနေကျရင် ထမင်းတစ်ဝိုင်းတည်း မလောက်မငှစားနေရတယ် ၊ ဒိုင်းကိုင်ပြီး ဟန်ဆောင်ရပ်နေရတဲ့ သူတွေရဲ့ ရင်တွေထဲမှာ ၊ မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ မိုးတွေရွာနေတယ် မောင်ချိုတူးဇော်........။
သတင်းဌာနတွေ ကိုယ့်တာဝန်တွေနဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေ ကျေပွန်ဖို့ လိုနေပါသေးသည်
မီဒီယာဆိုတာ လူထုကို မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ. မျှမျှတတ သတင်းပေးရမည့် တာဝန်ရှိပါသည်။ မျက်နှာလိုက်တာ ဘက်လိုက်တာ တဖက်သတ် ၀ါဒဖြန်.ချီတာ ၀ါဒဖြန်.သလို သာသာထိုးထိုး ပိုရေးတာမျိုးတွေဟာ စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်နဲ. ကိုက်ညီတဲ့လုပ်ရပ်တွေမဟုတ်ပဲ လူထုက အထင် သေးစရာဖြစ်တာမို.-- ရေရှည်မှာ အဲဒီရဲ့ ဆိုးကျိုးကို ကိုယ်ပဲ ပြန်ခံတတ်ပါသည်။
ကိုယ့်အလုပ်ကိုသာ တာဝန်ကျေအောင် လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် ဒီမိုကရေစီနဲ. လွတ်လပ်တဲ့ လူ. ဘောင်တည်ဆောက်ရေးကို အားပေးရာ ရောက်ပြီးသားပါ။ နိုင်ငံရေးပါတီက နိုင်ငံရေးပါတီ အလုပ် လုပ်မယ်။ နိုင်ငံရေးသမားက နိုင်ငံရေးသမား အလုပ် လုပ်မယ်။ အစိုးရနဲ. အာဏာပိုင် က အစိုးရအလုပ်လုပ်မယ်။ ဒီတော့ သတင်းသမားကလဲ သတင်းသမားအလုပ်ပဲ ပီပြင်ဖို.သာ လိုပါသည်။ လိုင်းပူးတာ၊ လိုင်းချော်တာတွေ မဖြစ်သင့်ပါ-- အန္တရာယ်လဲ ရှိပြီး စာနယ်ဇင်း သမားတဦးအနေဖြင့် လူထုအပေါ် တာဝန်မဲ့ရာလည်း ရောက်ပါသည်။
Fairness, Balance, Objectivity and Impartiality ဖြစ်ရမည်ဆိုတာ စာနယ်ဇင်းသမားတွေ ရဲ့ တာဝန်ပါ။ စည်းကမ်းကျင့်ဝတ်လဲ ဖြစ်ပါသည်။ တချိန်တည်းမှာ Equality & Opportunity ကိုလဲ ဟိုဖက်ဒီဖက် မျက်နှာမလိုက်ပဲ တန်းတူဆက်ဆံဖို. လိုပါသည်။ ထို.အတူ လူထုကို ကျယ်ကျယ်ပြန်.ပြန်.နဲ. ဘက်ပေါင်းစုံ ရှုဒေါင့်စုံကနေ အမှန်အတိုင်း သတင်းပေးဖို. သတင်း ဌာနတွေမှာ တာဝန်ရှိပါသည်။ ဒါဟာ သတင်းသမားအလုပ်ပါ။
အခုတစ်လော ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ် စည်းရုံး လှုပ်ရှားမှုများမှာ သံဃာတော်တွေ ပါဝင် ချီတက်တာ၊ ဟောပြောမှုကို နားထောင် တာတွေ လုပ်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စများမှာ သံဃာတော်များက ဒကာများကို ဦးဆောင် လမ်းညွှန် တာမျိုးတွေ ရှိနိုင်တာ မှန်ပေမယ့် ပါတီတစ်ခု အတွက် ၊ ဒကာတစ်ဦး အတွက် မဲဆွယ် လှုပ်ရှားပေးတာ လုပ်သင့်ပါသလာ။ ထေရ၀ါဒ နှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ သီရိလင်္ကာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ အဲဒီလို မဲဆွယ်မှုတွေမှာ သံဃာတွေ ပါဝင်ခွင့် မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ နီးတော့ မင်းကွန်း ဆရာတော်ကြီးတို့က အခုလို ညွှန်ကြားဖူးပါတယ်။
ထေရဝါဒ သံဃာ့ ဂိုဏ်းဝင် သမ္မုတိ သံဃာတို့သည် သာသနာတော် သန့်ရှင်း တည်တံ့ ပြန့်ပွားရေးကို ဦးတည်၍ သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်းသာမဏေတို့၏ ကိစ္စ ဖြစ်သော ဂန္ထဓုရ၊ ဝိပဿနာဓုရ နှစ်ပါးလုံးကို သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ပါးပါးကို သော်လည်းကောင်း ဆောင် ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပါတီ နိုင်ငံရေးများ၌ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ် ကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 10:15 AM
သူရဦးရွှေမန်း၏ ၀န်ထမ်းများလစာတိုးရေးကိစ္စ နောင်နှစ်မှစဉ်းစားမည်ဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးရှင်းလင်းတင်ပြ
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က သူရဦးရွှေမန်းက လွှတ်တော်သို့တင်ပြခဲ့သည့် အစိုးရ၀န်ထမ်းများအား လစာများတိုးမြှင့်ပေးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ယနေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီ(၁၆)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလှထွန်းက ပြန်လည် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြောင်း နေပြည်တော်မှလာသော သတင်းများအရ သိရှိရပါသည် ။
"၀န်ထမ်းများအား ၁၉၅၆-၆၀ ခုနှစ်များကကုန်ဈေးနှုန်းနှင့် လစာငွေများ အချိုးအစားအတိုင်း ယနေ့အခါတွင်ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ဆိုပါက အနိမ့်ဆုံးလစာပင်လျှင် ၂သိန်းတစ်သောင်းကျပ် မျှ ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအတွက်ဆိုပါက နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ကျပ်ငွေ ၅၆၀၀.၃၅၄ ဘီလျံမျှ သုံးစွဲရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဝေးလံခေါင်ဖျားမြို့နယ် ၈၅ မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြရသော ၀န်ထမ်းဦးရေ ၃၇၈၁၇ ဦးအတွက်မူ ထောက်ထားငဲ့ညှာသောအားဖြင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် လစာများတိုးပေးနိုင်ရေး အတွက်စီစဉ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအတွက်မူ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်မှ ထည့်သွင်း စဉ်းစားမည်ဖြစ်ကြောင်း" ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက ရှင်းလင်းတင်ပြသွားပါသည် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 2:01 AM
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် တိကျတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကတိစကားများ မူဝါဒများ လမ်းစဉ်များကို ချပြဖို. အချိန် ရောက်ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ.အခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး-- စတာတွေဟာ ယေဘူယျသာ ဖြစ်ပြီး လက်တွေ. လူထုက မဲထည့်ပေးလိုက်ရင် သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေ မဲပေးသူတွေအတွက် ဘာတွေကို လက်တွေ.ကျကျ တကယ် လုပ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ တိကျတဲ့ ကတိစကားတွေ ဖြစ်ဖို. လိုပါသည်။
Be Specific and Achievable Promise ဖြစ်ပြီး အဲဒီ ကတိစကားတွေ တည်မတည် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း ရှိမရှိကို မဲထည့်သူတွေက Measurable ဖြစ်ဖို.လိုပါသည်။ ဒါမှသာ နိုင်ငံရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာ ပေးထားတဲ့ ကတိတွေအတိုင်း ဘယ်အတိုင်အတာအထိ ဘယ်လောက်ထိ လက်တွေ.ကျကျ လုပ်ပေးခဲ့သလဲဆိုတာ တိုင်းတာလို. စစ်ဆေးလို. ထောက်ပြလို.ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ။ လူ.အခွင့်အရေးနဲ. တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး---ဆိုတာ ကျယ်ပြန်.ပြီး အမေရိကန် ဗြိတိန်နဲ. ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာတောင် အခုထိ မြင့်တင်နေရ ကာကွယ်နေရတဲ့ အရာတွေ မဟုတ်ပါလား။ ။ ဒါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ကြမည့် နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ ကိုယ်စားလှယ်တွေ အနေဖြင့် တိကျတဲ့ ကတိစကားတွေ လက်တွေ. ကျကျ ဖြစ်နိုင် လုပ်ပေးနိုင်မည့် အာမခံချက်တွေ ပေးဖို. မဲပေးကြမည့် ပြည်သူတွေက တောင်းဆိုရမည် မေးခွန်း ထုတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 1:06 AM
COUNTRY CODE DESTINATION $0.15 COUNTRIES $0.35 COUNTRIES
54/549 ARGENTINA - Fixed & Mobile $0.15 -
61/614 AUSTRALIA - Fixed & Mobile $0.15 -
43/436 AUSTRIA - Fixed & Mobile $0.15 -
1242 BAHAMAS - Fixed $0.15 -
973/9733 BAHRAIN - Fixed & Mobile $0.15 -
880/8801 BANGLADESH - Fixed & Mobile $0.15 -
32 BELGIUM - Fixed $0.15 -
591 BOLIVIA - Fixed $0.15 -
55 BRAZIL - Fixed $0.15 -
673/6732 BRUNEI - Fixed & Mobile $0.15 -
359 BULGARIA - Fixed $0.15 -
855/8551 CAMBODIA - Fixed & Mobile $0.15 -
1204 CANADA - Fixed & Mobile $0.15 -
56 CHILE - Fixed & Mobile $0.15 -
86/861 CHINA - Fixed & Mobile $0.15 -
57 COLOMBIA - Fixed & Mobile $0.15 -
385 CROATIA - Fixed $0.15 -
357 CYPRUS - Fixed & Mobile $0.15 -
420 CZECH REPUBLIC - Fixed $0.15 -
45 DENMARK - Fixed $0.15 -
20/2010 EGYPT - Fixed & Mobile $0.15 -
358/3584 FINLAND - Fixed & Mobile $0.15 -
33/336 FRANCE - Fixed & Mobile $0.15 -
49 GERMANY - Fixed $0.15 -
30 GREECE - Fixed $0.15 -
852/8526 HONG KONG - Fixed & Mobile $0.15 -
36 HUNGAR - Fixed $0.15 -
91/919 INDIA - Fixed & Mobile $0.15 -
62/628 INDONESIA - Fixed & Mobile $0.15 -
353 IRELAND - Fixed $0.15 -
972/9725 ISRAEL - Fixed & Mobile $0.15 -
39 ITALY - Fixed $0.15 -
1876 JAMAICA - Fixed $0.15 -
81 JAPAN - Fixed $0.15 -
862 JORDAN - Fixed $0.15 -
82/821 KOREA - Fixed & Mobile $0.15 -
856/85620 LAOS - Fixed & Mobile $0.15 -
853/8536 MACAU - Fixed & Mobile $0.15 -
60/601 MALAYSIA - Fixed & Mobile $0.15 -
52 MEXICO - Fixed & Mobile $0.15 -
976 MONGOLIA - Fixed & Mobile $0.15 -
31 NETHERLANDS - Fixed $0.15 -
64 NEW ZEALAND - Fixed $0.15 -
47 NORWAY - Fixed $0.15 -
92/923 PAKISTAN - Fixed & Mobile $0.15 -
507 PANAMA - Fixed $0.15 -
595 PARAGUAY - Fixed $0.15 -
51 PERU - Fixed $0.15 -
63 PHILIPPINES - Fixed $0.15 -
48/485 POLAND - Fixed & Mobile $0.15 -
351 PORTUGAL - Fixed $0.15 -
40 ROMANIA - Fixed $0.15 -
7 RUSSIA - Fixed $0.15 -
65/(M)658/659 SINGAPORE - Fixed & Mobile $0.15 -
27 SOUTH AFRICA - Fixed $0.15 -
34 SPAIN - Fixed $0.15 -
46 SWEDEN - Fixed $0.15 -
41 SWITZERLAND - Fixed $0.15 -
886/8869 TAIWAN - Fixed & Mobile $0.15 -
66/668 THAILAND - Fixed & Mobile $0.15 -
90 TURKEY - Fixed $0.15 -
44 UK - Fixed $0.15 -
598 URUGUAY - Fixed $0.15 -
1 USA - Fixed & Mobile $0.15 -
58 VENEZUELA - Fixed & Mobile $0.15 -
84/849 VIETNAM - Fixed & Mobile $0.15 -
93 AFGHANISTAN - Fixed & Mobile - $0.35
355 ALBANIA - Fixed & Mobile - $0.35
213 ALGERIA - Fixed & Mobile - $0.35
1242 BAHAMAS - Mobile - $0.35
375 BELARUS - Fixed & Mobile - $0.35
3246 BELGIUM - Mobile - $0.35
975 BHUTAN - Fixed & Mobile - $0.35
591 BOLIVIA - Mobile - $0.35
55 BRAZIL - MOBILE - $0.35
359 BULGARIA - Mobile - $0.35
3859 CROATIA - Mobile - $0.35
4206 CZECH REPUBLIC - Mobile - $0.35
452 DENMARK - Mobile - $0.35
491 GERMANY - Mobile - $0.35
233 GHANA - Fixed & Mobile - $0.35
3069 GREECE - Mobile - $0.35
1671 GUAM - Fixed & Mobile - $0.35
36 HUNGARY - Mobile - $0.35
98/989 IRAN - Fixed & Mobile - $0.35
2964 IRAQ - Fixed & Mobile - $0.35
35376 IRELAND - Mobile - $0.35
972 ISRAEL-PALESTINE - Fixed - $0.35
393 ITALY - Mobile - $0.35
1876 JAMAICA - Mobile - $0.35
962 JORDAN - Mobile - $0.35
254 KENYA - Fixed & Mobile - $0.35
965 KUWAIT - Fixed & Mobile - $0.35
961 LEBANON - Fixed & Mobile - $0.35
977 NEPAL - Fixed & Mobile - $0.35
316 NETHERLANDS - Mobile - $0.35
642 NEW ZEALAND - Mobile - $0.35
234/(M)23480/23490 NIGERIA - Fixed & Mobile - $0.35
470 NORWAY - Mobile - $0.35
968 OMAN - Fixed & Mobile - $0.35
507 PANAMA - Mobile - $0.35
595 PARAGUAY - Mobile - $0.35
51 PERU - Mobile - $0.35
639 PHILIPPINES - Mobile - $0.35
3511 PORTUGAL - Mobile - $0.35
974/9742 QATAR - Fixed & Mobile - $0.35
407 ROMANIA - Mobile - $0.35
79 RUSSIA - Mobile - $0.35
966/9665 SAUDI - Fixed & Mobile - $0.35
277/278 SOUTH AFRICA - Mobile - $0.35
346 SPAIN - Mobile - $0.35
94/947 SRI LANKA - Fixed & Mobile - $0.35
249 SUDAN - Fixed & Mobile - $0.35
467 SWEDEN - Mobile - $0.35
4158 SWITZERLAND - Mobile - $0.35
905 TURKEY - Mobile - $0.35
971/9715 UAE - Fixed & Mobile - $0.35
447 UK - Mobile - $0.35
380 UKRAINE - Fixed & Mobile - $0.35
598 URUGUAY - Mobile - $0.35
မြန်မာနိုင်ငံဘတ်ဂျက်မှာ ပညာရေးကနည်းတယ် ၊ ကျန်းမာရေးကနည်းတယ် ဟိုဟာကနည်းတယ် ဒီဟာကများတယ် ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးပြောသံဆိုသံတွေ၊ဝေဖန်သံတွေကို မကြာခဏဆိုသလိုကြားနေရ ဖတ်နေရပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ၀င်ငွေခွန်မဆောင် ၊ ဆောင်ရမှန်းလည်းမသိ ဖြစ်နေကြ တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်က ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွန်တွေနစ်နာနေလို့ ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပြည်သူ့လုံခြုံရေး ကိစ္စတွေမှာ ထိုက်သင့်သလောက် မသုံးနိုင်မစွဲနိုင်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာကို သိသူတွေအများကြီးရှိပေမယ့် တစ်တိုင်းပြည်လုံးကို အခွန်ဆောင်ဘို့ အမုန်းခံပြီးပြောရမယ့် ကိစ္စဖြစ်နေတော့ နှာစေးနေကြတယ် ။
မြန်မာပြည်မှာက ၀င်ငွေခွန်ဆိုတာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပဲဆိုင်တဲ့ကိစ္စလို့ ထင်နေကြတယ် ၊ အမှန်က တစ်တိုင်းပြည်လုံး လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် ( ဥပဒေအရ ၀င်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသည်များမှအပ ) အသက်အရွယ်မရွေး ၊ ၀င်ငွေရှိသူတိုင်း အသားတင်ဝင်ငွေ အပေါ်မှာ အခွန်ဆောင်ကို ဆောင်ရမယ် ၊ ဒါနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ တာဝန်ပဲ ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 11:26 AM
( ၅၀၀၀ တန်ဖုန်း အိမ်မက်မက်ရင်း အိမ်မက်ထဲကနေ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေကို မေတ္တာပို့နေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ကိုစစ်အောင်ရဲ့ ဆောင်းပါးကိုဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ် )
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်လိုက်တာ အပြီး နောက်ထပ် လူပြော သူပြော အများဆုံးက ငါးထောင်တန်း ဆင်းကဒ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပဲ။ ဖုန်းတစ်လုံး ငါးသိန်းဆိုလို့ စိတ်ပျက်သူ များနေတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ငါးထောင် ဆိုတာနဲ့ အုန်းအုန်း ထသွားလိုက်တာ ဆက်သွယ်ရေးက ရှင်းပြတာတောင် မရတော့ဘဲ Campaign လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ ဘ၀တောင် ရောက်ပါလေရော။ ထုံးစံအတိုင်း လူကြမ်း မင်းသားကတော့ ဆက်သွယ်ရေးပေါ့။
ကျွန်တော်ကတော့ ငါးထောင်ဖုန်း ကိုင်ရမယ် ဆိုတော့ ပျော်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရွှေပြည်တံခွန် ကုမ္ပဏီရဲ့ ရှင်းလင်းချက်မှာ လုပ်ခွင့်ရပြီ ဆိုတာနဲ့ အစု ရှယ်ယာတွေ ထုတ်ရောင်းမယ် ဆိုတဲ့ စကား ပါလာတော့ နားရွက် ထောင်သွားတယ်။ အဖေတို့က အရင်းမဆုံး ငါးထောင်ဆိုတဲ့ ထီကိစ္စ၊ ပင်လုံထိပ်ထား အတိုးတို့နဲ့ ရေတိမ် နစ်ခဲ့ဘူးတော့ စတော့ ဈေးကွက် မရှိတဲ့ နိုင်ငံမှာ ရှယ်ယာဆိုရင် သွေးလန့် နေတာကိုး။ ဒါနဲ့ သတိ ထားကြဦးနော် ဆိုပြီး Comment ရေးတော့လည်း ထောက်ခံမယ့်လူ မရှိဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ပို့စ်ရေးတင်ဖို့ အတွက် ခိုင်ခိုင်မာမာ အချက်တွေ ရှာပြီး ရေးပြလိုက်တာပါ။ အားလုံး စဉ်းစားနိုင်ဖို့ပေါ့၊ မင်း ဂျာနယ် သွားရေး ပါလားလို့တော့ မပြောနဲ့ဦး။ ဒင်းတို့ကပါ ငါးထောင် အိပ်မက် မက်နေတော့ အယ်ဒီတာမင်းများက စကားတောင် အစမခံဘူးဗျာ။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ပိုင်တဲ့ အဖေ့ဘုတ်မှာပဲ ၀င်အုပ်ရတာ။
စီးပွားရေး အဆိုပြုချက် တစ်ခုကို ကြားပြီဆိုရင် ပထမဆုံး စဉ်းစားသင့်တာက ဘယ်သူ လုပ်မှာလဲ ဆိုတာပဲ။ အင်္ဂလိပ် စကားမှာ Ponzi scheme ဆိုတာ ရှိတယ်။ ၁၉၂၀ ခုနှစ်မှာ Charle Ponzi ဆိုတဲ့လူက အမေရိကန် နိုင်ငံ ဘော့စတွန်မြို့မှာ လုပ်စားခဲ့တာ။ သူက သူ့ကုမ္ပဏီမှာ ရင်းနှီး မြှပ်နှံသူတွေကို ၄၅ ရက်အတွင်း အမြတ် ၅၀% ပေးမယ် ဆိုပြီး လုပ်စား သွားတယ်။ တကယ်တော့ သူက အဲဒီအချိန်မှာ ချက်လက်မှတ် အတုထိုးမှုနဲ့ ထောင်က ထွက်လာပြီး ဘိုင်ကျနေတဲ့လူ၊ သူ့ကို မကြားဘူးတဲ့ ဘေ့ာစတွန်မြို့မှာ လာပြီး လိမ်သွားတာ။ အဲဒီကစပြီး လူတွေကို မက်လုံးပေး၊ ငွေယူ၊ နောက်လူပေးတဲ့ ငွေနဲ့ အရင် အပ်တဲ့လူကို အတိုးပေး၊ များလာတော့ လစ်ပြေး ဆိုတဲ့ လိမ်နည်း မှန်သမျှကို Ponzi scheme လို့ ခေါ်တော့ တာပဲ။
အခု ငါးထောင်တန် ဆင်းကဒ်ကို လုပ်မယ့် ရွှေပြည်တံခွန် ဆိုတာ တခါမှ မကြားဖူးဘူး။ (ကျွန်တော့် အတွက်) ပိုင်ရှင်ဆိုတဲ့ လူကလည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ ခေတ်ပျက် သူဌေးခေါ်ခေါ် ဘီလျံနာ ခေါ်ခေါ် အဲဒီ လူတွေထဲမှာ မပါဘူး။ ဒါနဲ့ ဘယ်ကတုံးလို့ စုံစမ်း လိုက်တော့ အခုလို တွေ့သဗျာ၊ ဘယ်လို နည်းများ သုံးသလဲလို့ အထင်ကြီး မသွားနဲ့၊ ကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ သွားမေးရင် ရတယ်။ ဘယ်သူမှ မေးဖို့ စိတ်မကူးလို့ ရှာပြီး တင်ပြလိုက်တာ။
ရွှေပြည်တံခွန် ကုမ္ပဏီကို ၂၀၁၁ သြဂုတ်လ ၂၅ မှာ ဖွဲ့တယ်။ ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ စီမံ/ စီးပွားက မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုတယ်။ ဒီတော့ ၅၀၀၀ တန် ဆင်းကဒ် အကြောင်း ပြောတဲ့ အချိန်မှာ မှတ်ပုံတင်တောင် မကျသေးဘူး။
ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့မှာ ဦးလွင်နိုင်ဦးက အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ၊ ဒေါ်စုစုလွင် (သူ့ဇနီး) က ဒါရိုက်တာ၊ ဒေါ်ဝင်းဝင်းကြည် (သူ့အမေ) က ဒါရိုက်တာ သုံးဦးနဲ့ ဖွဲ့ထားတယ်။ ဖြစ်ပုံများ။
ရုံးခန်းက အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ ရွှေဂုံသူ ကွန်ဒိုမှာ Media-Tech ဆိုတဲ့ တစ်ခြား ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ တွဲဖွင့်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီ သူဌေး ဦးလွင်နိုင်ဦးက အမှတ် ၃၇/အေ လှိုင်မြစ်လမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်မှာ အခန်းငှား နေတယ်။ ဘေးနားမှာ စုံစမ်းကြည့်တော့ ဇာတိက ပျဉ်းမနား၊ အဖေက စက်မှု လယ်ယာက စက်ကြီးမောင်း ခေါင်းဆောင် တဲ့။ စီးတဲ့ကား စူပါကက်စတန်က ငှားထားတာ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 8:19 AM
"တက္ကသိုလ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အမေရိကန်နှင့် ပြင်သစ် လာရောက်ဆွေးနွေး"
တစ်ချိန်က နာမည်ကျော် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
အမေရိကန်နှင့်ပြင်သစ်တို့မှ မြန်မာတက္ကသိုလ် များနှင့်ပူးပေါင်း၍ ပညာရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို လာရောက်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
အမေရိကန် သိပ္ပံပညာအဆင့် မြှင့်တင်ရေးအသင်းမှ Dr. Vaughan Turekian နှင့်အဖွဲ့သည် ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ ဆုံကာ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ် များသို့မြန်မာပညာတော်သင် စေလွှတ် ခြင်း ကိစ္စများအပါအဝင် အဆင့်မြင့် ပညာကဏ္ဍ၌ သုတေသနလုပ်ငန်း များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဆရာအတတ်ပညာဆိုင်ရာသင်တန်း များ ဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ပြင်သစ် နိုင်ငံ University Lumiere (Lyon 2) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ Mr.Andre IRIAN ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့နှင့်လည်း တက္ကသိုလ်များအကြား ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်ရေးနှင့် ပြင်သစ်ဘာသာ၊ သိပ္ပံ၊ ဝိဇ္ဇာဘာသာများ၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ သိပ္ပံနှင့် ဥပဒေဘာသာရပ် တို့တွင် မဟာဘွဲ့နှင့် ပါရဂူသင်တန်း များသို့ မြန်မာ ပညာတော်သင်များ စေလွှတ်နိုင်ရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်ဟု တာဝန်ရှိသူထံမှ သိရသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အကြံ ပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ အငြိမ်းစား ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ ထွန်းခင်က'' ပြည်ပနိုင်ငံတွေ က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆို တာက သိပ်ကောင်းတဲ့ အလုပ်ပါ။ နိုင်ငံကြီးတွေ ဆိုတော့အကျိုးရလဒ်များ စွာ ရရှိနိုင်ပါတယ်'' ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိအစိုးရ လက်ထက်၌ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ၊ လွတ် ငြိမ်းခွင့်ပြုခြင်း များနှင့် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ မှုများကြောင့် ရရှိလာသည့် အကျိုး ကျေးဇူးများ ဖြစ်သည်ဟု မြန်မာ့ ပညာရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာနေသူ များကသုံးသပ်ကြသည်။
ပညာရေး အဆင့်အတန်းမြင့် မားမှုတွင် နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံ ရှိမှုမှာ တစ်ခန်း တစ်ကဏ္ဍ အနေဖြင့် ပါဝင်သည့်အပြင် ပြည်ပတက္ကသိုလ် များနှင့် နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များ ချိတ် ဆက်ကာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါကလည်း သုတေသန လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် ရာတွင် ယခင်ထက် အောင်မြင်မှု ပိုမို ရရှိလာနိုင်မည်ဟု ဒေါက်တာထွန်း ခင်က ထပ်လောင်းဆိုသည်။
အနောက်နိုင်ငံကြီး များဆီသို့ မြန်မာ ပညာတော်သင်များ ယခင်က ထက် ပိုမိုစေလွှတ်သွားနိုင်မည်ဟု ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန အဆင့်မြင့် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးက ပြောသည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 11:03 PM